သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်သူ သုံးဦးကို ဓါး နဲ့ထိုးသတ်တဲ့ မိခင် အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်…! •
05/07/2019 Yan Naing နိုင်ငံတကာသတင်း 0
သူမရဲ့ သမီး ကို အဆိုပါ သုံးဦးက မုဒိန်းကျင့် နေချိန် ယခုလို တစ်ဟုန်ထိုး တိုက်ခိုက် ခဲ့တာဖြစ်ပြီး “ ခြင်္သေ့ မေမေ ” လို့ တောင် အာဖရိကနိုင်ငံ တစ်ဝှန်း အင်တာနက် သုံးစွဲ သူများက ခေါ်ဆိုကြပါတယ် ။ သူမကို တရားစီရင် နေစဉ် အတွင်း ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် လိုက်ပါက လူထုရဲ့ ဒေါသပေါက်ကွဲတဲ့ ဖိအားနဲ့ ကြုံတွေ့မယ့် အလားအလာများ ရှိနေခဲ့ပြီး ၊ Lady Frere Magistrates တရားရုံး ရှေ့မှာလည်း စုရုံး ဆန္ဒပြ မှုများ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ကာ ၊ နောက်ဆုံး အားဖြင့် အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက် ကို အများ ပြည်သူ များက ကြိုဆိုခဲ့ ကြကြောင်း သိရ ပါတယ် ။
သမီးကို မုဒိန်းကျင့် သူ သုံးဦးအနက် တစ်ဦး ကို အသေ ၊ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရအောင် ဓားဖြင့်ထိုးသည့် အမျိုးသမီး အမှု မှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ် ။
လူတစ်ဦး ကို ဓားဖြင့် အသေထိုး သတ်ပြီး ကျန်နှစ်ဦးကို ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာ ရရှိသည် အထိ တိုက်ခိုက် ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ ၊ အများပြည်သူ တရားရုံးက လူသတ်မှု မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးလိုက်ကြောင်း သိရ ပါတယ် ။
တောင် အာ ဖ ရိ က နိုင် ငံ ကိတ်ပ် အ ရှေ့ ပိုင်း မှ ၊ ကမ် ဘူး ရွာ အိမ် အ လွတ် တစ် လုံး မှာ သူ မ ရဲ့ သ မီး ကို လူ သုံး ဦး က မု ဒိန်း ကျင့် နေ ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ စက် တင် ဘာ ၂ ရက် နေ့က ဖြစ် ပွား ခဲ့ တဲ့ အ ဆို ပါ ဖြစ် စဉ် အ တွင်း သ မီး ဖြစ် သူ အ န္တ ရာယ် ကျ ရောက် နေ ပြီ လို့ သိ သိ ရ ခြင်း ၃ ကီ လို မီ တာ ခ ရီး ကို မီး ဖို ချောင် သုံး ဓား ကို ဆွဲ လျက် အ ပြေး သွား ရောက် တိုက် ခိုက် ခဲ့ တာ ကြောင့် ကြား ရ သူ အ ပေါင်း အံ့ အား သင့် ခဲ့ ပါ တယ် ။
ကြာက် မက် ဖွယ် တိုက် ခိုက် မှု များ အ ပြီး အ သက် ၂၇ နှစ် အ ရွယ် သ မီး ဖြစ် သူ ကို နှစ် သိမ့် ပေးလျက် ရဲ တပ် ဖွဲ့ ၏ ဖမ်း ဆီး မှု ကို စောင့် ဆိုင်း နေ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဒါ ပေ မယ့် တောင် အာ ဖ ရိ က အ မျိုး သား ပြစ် မှု ဥ ပေ ဒ ဆိုင် ရာ အာ ဏာ ပိုင် များ က သ မီး ဖြစ် သူ ရဲ့ အိန် ဒြေ သိက္ခာ ကို ကာ ကွယ် ရန် အ လို့ ငှာ ကျူး လွန် ခဲ့ တာ ဖြစ် လို့ လူ သတ် မှု ဆို တဲ့ စံ နှုန်း တွေ နဲ့ မ ကိုက် ညီ ကြောင်း ဆုံး ဖြတ် ခဲ့ ပါ တယ် ။ အ မျိုး သ မီး ရဲ့ အ မည် ရင်း ကို တော့ ဖော် ထုတ် ခြင်း မ ပြု ဘဲ တ ရား ခံ သုံး ဦး အ နက် Xolisa Siyeka က တော့ အ ခင်း ဖြစ် ပွား စဉ် မှာ ပင် ဓား ဒဏ် ရာ နဲ့ သေ ဆုံး ခဲ့ ရ ပြီး Mncedisi Vuba နဲ့ Zamile Siyeka တို့ က တော့ ဒဏ် ရာ ကု သ မှု ခံ ယူ အ ပြီး ၊ မု ဒိန်း မှု နဲ့ ဆက် လက် တ ရားရင် ဆိုင် ရ မှာ ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ ပါ တယ် ။
Credit: best myanmar new
သမီးကို မုဒိမျးကငျြ့သူ သုံးဦးကို ဓါး နဲ့ထိုးသတျတဲ့ မိခငျ အမှုမှ ကှငျးလုံးကြှတျလှတျ…!
သူမရဲ့ သမီး ကို အဆိုပါ သုံးဦးက မုဒိနျးကငျြ့ နခြေိနျ ယခုလို တဈဟုနျထိုး တိုကျခိုကျ ခဲ့တာဖွဈပွီး “ ခွင်ျသေ့ မမေေ ” လို့ တောငျ အာဖရိကနိုငျငံ တဈဝှနျး အငျတာနကျ သုံးစှဲ သူမြားက ချေါဆိုကွပါတယျ ။ သူမကို တရားစီရငျ နစေဉျ အတှငျး ပွဈဒဏျ ခမြှတျ လိုကျပါက လူထုရဲ့ ဒေါသပေါကျကှဲတဲ့ ဖိအားနဲ့ ကွုံတှမေ့ယျ့ အလားအလာမြား ရှိနခေဲ့ပွီး ၊ Lady Frere Magistrates တရားရုံး ရှမှေ့ာလညျး စုရုံး ဆန်ဒပွ မှုမြား ဖွဈပျေါ ခဲ့ကာ ၊ နောကျဆုံး အားဖွငျ့ အခုလိုဆုံးဖွတျခကျြ ကို အမြား ပွညျသူ မြားက ကွိုဆိုခဲ့ ကွကွောငျး သိရ ပါတယျ ။
သမီးကို မုဒိနျးကငျြ့ သူ သုံးဦးအနကျ တဈဦး ကို အသေ ၊ နှဈဦး ဒဏျရာ ရအောငျ ဓားဖွငျ့ထိုးသညျ့ အမြိုးသမီး အမှု မှ ကှငျးလုံးကြှတျလှတျ ။
လူတဈဦး ကို ဓားဖွငျ့ အသထေိုး သတျပွီး ကနျြနှဈဦးကို ပွငျးထနျစှာ ဒဏျရာ ရရှိသညျ အထိ တိုကျခိုကျ ခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီး တဈဦးကို တောငျအာဖရိက နိုငျငံ ၊ အမြားပွညျသူ တရားရုံးက လူသတျမှု မှ ကငျးလှတျခှငျ့ ပေးလိုကျကွောငျး သိရ ပါတယျ ။
တောငျ အာ ဖ ရိ က နိုငျ ငံ ကိတျပျ အ ရှေ့ ပိုငျး မှ ၊ ကမျ ဘူး ရှာ အိမျ အ လှတျ တဈ လုံး မှာ သူ မ ရဲ့ သ မီး ကို လူ သုံး ဦး က မု ဒိနျး ကငျြ့ နေ ခဲ့ တာ ဖွဈ ပါ တယျ ။ စကျ တငျ ဘာ ၂ ရကျ နကေ့ ဖွဈ ပှား ခဲ့ တဲ့ အ ဆို ပါ ဖွဈ စဉျ အ တှငျး သ မီး ဖွဈ သူ အ န်တ ရာယျ ကြ ရောကျ နေ ပွီ လို့ သိ သိ ရ ခွငျး ၃ ကီ လို မီ တာ ခ ရီး ကို မီး ဖို ခြောငျ သုံး ဓား ကို ဆှဲ လကျြ အ ပွေး သှား ရောကျ တိုကျ ခိုကျ ခဲ့ တာ ကွောငျ့ ကွား ရ သူ အ ပေါငျး အံ့ အား သငျ့ ခဲ့ ပါ တယျ ။
ကွောကျ မကျ ဖှယျ တိုကျ ခိုကျ မှု မြား အ ပွီး အ သကျ ၂၇ နှဈ အ ရှယျ သ မီး ဖွဈ သူ ကို နှဈ သိမျ့ ပေးလကျြ ရဲ တပျ ဖှဲ့ ၏ ဖမျး ဆီး မှု ကို စောငျ့ ဆိုငျး နေ တာ လညျး ဖွဈ ပါ တယျ ။
ဒါ ပေ မယျ့ တောငျ အာ ဖ ရိ က အ မြိုး သား ပွဈ မှု ဥ ပေ ဒ ဆိုငျ ရာ အာ ဏာ ပိုငျ မြား က သ မီး ဖွဈ သူ ရဲ့ အိန် ဒွေ သိက်ခာ ကို ကာ ကှယျ ရနျ အ လို့ ငှာ ကြူး လှနျ ခဲ့ တာ ဖွဈ လို့ လူ သတျ မှု ဆို တဲ့ စံ နှုနျး တှေ နဲ့ မ ကိုကျ ညီ ကွောငျး ဆုံး ဖွတျ ခဲ့ ပါ တယျ ။ အ မြိုး သ မီး ရဲ့ အ မညျ ရငျး ကို တော့ ဖျော ထုတျ ခွငျး မ ပွု ဘဲ တ ရား ခံ သုံး ဦး အ နကျ Xolisa Siyeka က တော့ အ ခငျး ဖွဈ ပှား စဉျ မှာ ပငျ ဓား ဒဏျ ရာ နဲ့ သေ ဆုံး ခဲ့ ရ ပွီး Mncedisi Vuba နဲ့ Zamile Siyeka တို့ က တော့ ဒဏျ ရာ ကု သ မှု ခံ ယူ အ ပွီး ၊ မု ဒိနျး မှု နဲ့ ဆကျ လကျ တ ရားရငျ ဆိုငျ ရ မှာ ဖွဈ ကွောငျး သိ ရ ပါ တယျ ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲကျွန်းကို အပိုင်စားရတဲ့ ပာတောင်ရှင်မနဲ့ နေရာချင်း လဲခံရသူ